ICRC oo shaqaale badan eriday iyadoo uu socdo baaritaan dhaqan-xumo galmo - BBC News Somali
Image caption Guddida Laanqeyrta Cas ee caalamiga ah (ICRC)
Guddida Laanqeyrta Cas ee caalamiga ah (ICRC) ayaa sheegay in tiro ka badan 20 qof oo ka mid ahaa shaqaalahooda shaqada laga eryey kaddib markii ay ku kaceen dhaqan-xumo dhanka galmada ah tan iyo sannadkii 2015kii.
Shaqaalaha ayaa qaarkood shaqada laga fariisiyey kaddib markii la ogaadey in ay lacag ku bixiyaan adeegga dumarka ka ganacsada jirkooda, qaar kale waa ay is-casileen iyadoo uu baaritaan ku socday. ICRC waxaa u shaqeeya dad gaaraya 17 kun oo qof dunida oo dhan.
Laanqeyrta Cas ee caalamiga ah waxay sheegtay inay ogaatay 21 qof oo shaqaale ahaa oo tan iyo sanadkii 2015-kii loo eryay inay haween jirkooda ka ganacsada isticmaaleen ama iyagu iscasilay intii uu socday baaritaan hay'addu gudaheeda ku sameynaysay arrimahooda. laba qof oo kale ayaa lagu tuhmay inay ku kaceen dhaqan xumo xagga galmada ah, waxaana laga joojiyay cusbooneysiinta heshiisyadooda shaqada.
Hay'adda waxaa si cad mamnuuc uga ah in shaqaalaheedu lacag galmo uga iibsadaan haweenka jirkooda ka ganacsada, xataa meelaha ay sahrci ka tahay in galmada lacag lagu iibsado. Hadal uu soo saaray, agaasimaha guud ee hay'adda ICRC, Yves Daccord, waxaa uu qiray inay ahayd in hay'addu ay aad uga digtoonaato arrimahan, waxaana uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono khaladaadka dhacay. Waxaa uu sheegay in shilalka dhacay aan la soo sheegin markii ay hayd in la soo sheego. Kuwii la soo sheegayna aan si habboon wax looga qaban.